China BD2AE-Floor Renewing Machine ifektri abakhiqizi | Jinqiu
Idizayinelwe i-super double- capacitor namandla aphezulu okupholisa umoya.
Ukusebenza okuphephe ngokwengeziwe nokukhishwa kwamandla okunamandla okuthe xaxa kunikeziwe.
Inemisebenzi eminingi njengokukhaphethi nokuhlanza phansi, ukususa i-wax, ukupholisha ngejubane eliphansi, ukwelashwa ngekristalu phansi nokuvuselela.
Into No. BD2AE
I-Voltage / Imvamisa 220V-240V / 50Hz
Ububanzi bepuleti base 17 ”
Isisindo esikhulu 72.56kg
Isisindo sensimbi 1X14.5kg
Usayizi omkhulu wokupakisha umzimba 535X430X375mm
Setha ibhodi lezaziso endaweni yomsebenzi. Ukuze uvikele udaka nokungcola ukuba kungagxili odongeni, sebenzisa ifilimu epulasitiki ukunamathisela phansi kodonga oluzungeze umhlaba. Faka amanzi ahlanzekile ethangini lomshini, xhuma amandla, lungisa izinhlobo ezahlukahlukene zokusika ama-disc, amapholishi wokupholisha, ama-buffer pads njll, bese ulungisa umshini wokuvuselela kanye nezinga lomhlabathi ukulungiselela umsebenzi wokuhlanza. Uma kune-wax endala phansi, sicela ususe i-wax kuqala.
Lapho umshini usebenza, jikisa ikhanda kwesobunxele nakwesokudla.
Sebenzisa amadiski okugaya ukugaya phansi bushelelezi. Ukugaya cishe imitha elilodwa lesikwele njalo, ucindezela ngokuphindaphindiwe nokudonsa ngamanzi afanele.
Suck the water out use vacuum cleaner, yenze yomile.
Sebenzisa ama-50 #, 200 #, 400 #, 800 #, 1500 #, 3000 # wokupholisha amapayipi wokupholisha phansi.
Sebenzisa ama-buffer pads anamakhemikhali ukupholisha ingaphezulu, ukwenze kukhanye.
Langaphambilini Umshini Wokuvuselela I-BD1AE
Olandelayo: Floor Ukuvuselela Machine SC-004